Talooyin ku aadan ka faa’ideysiga Ramadaanka | Somaliska
Talooyin ku aadan ka faa’ideysiga Ramadaanka
Yaa Muslimiin, Ramadaan waxaa ka dhiman dhowr maalmood oo keliya. Waa maxay qorshahaaga ku aadan ka faa’ideysigiisa? Haddii aad qorshe dajisay waxaan ku leeyahay hambalyo. Haddii aadan qorshe degsan waxaan halkaan kuugu soo bandhigayaa dhowr qodob oo aan rajeynayo in ay ku anfici doonaan. Waxaan idin xasuusinayaa anigu khabiir kuma ihi arimaha diinta balse macluumaadkaan waxaan ka soo minguuriyay ilo kale.
1. Dhexdhexaad ka dhig cuntadaada – Arintaani waa mid na wada qabsatay, markii afurka la soo dhigo ayaa qofkasba bilaabaa qorshihii uu caloosha ku buuxin lahaa ilaa aad kici waydo. Ramadaanka waxaa loogu tala galay in qofku ku barto is xakameynta. Sidaa darteed waa in aad cuntada iska xakameysaa oo aadan ku talaxtagin. Xasuusnoow in ay jiraan dad aan afurka awoodin.
2. Ha iloobin sadaqada – Muslimiinta waxaa xili kasta laga doonayaa in ay bixiyaan sadaqada balse ramadaanka waxaa la doonayaa in kor loo qaado, oo deeqsinamadu ay ka midnoqoto dabeecadaha cusub ee Ramadaanka.
3. Xafid suurado ka mid ah Quraanka – Xiliga lagu jiro Ramadaanka ayaa ugu fiican in aad xafido Quraanka. Madaxu waa deganyahay Ramadaanka. waxaad qorshaha ku darsataa in aad barato macnaha oo aad xafido dhowr suuradood ama ka badan inta lagu jiro Ramadaanka.
4. Raadi taraawiixda – Inkastoo aan ku noolnahay wadan ay masaajidu ku yaryihiin, hadana waxaad wada ogtihiin fadliga salaada jameecada. Haddii aad ku nooshahay goob ay dad kale oo Muslimiin ah ku nool yihiin oo ay jidho goob masjid ah, ku dadaal in aad taraawiixda jameecada ku tukato. Intii awoodaada ah.
5. Hoos u dhig il-qabatadaada – Waxaa lagu jiraa xiligii xagaaga oo wadankaan dumarku ay xiranjireen dharka kuwa ugu qafiifsan. Waxaa taas sii dheer Ramadaankii oo ku soo aaday xiligaan. Hadaba ragoow maxaa talo ah? Inkastoo ninka Muslimka ah laga doonayo in uu xili kasta ishiisa hoos u dhigo, ayaa hadana Ramadaanka la doonayaa in uu kuu noqdo tababarka nolosha. Waa xiligii aad baran lahayd oo aad xakameyn lahayd naftaada. Hoos u dhig il-qabataada!
6. La xiriir qaraabada – Markii qurbaha la yimid waxaa laga mashquulay dad badan oo horay asxaab iyo qaraabo loo ahaa, waxaa dhici karta in aynan ismaqal mudo. Hadaba ramadaanku waa fursadii aad dadkaasi kula xiriiri lahayd. Xiriiri qaraabada iyo asxaabtaadii hore. Intaad kaarka buuxiso ku dhamee in aad wacdo qofkasta oo aad xasuusato. Ugu bishaaree bilashada Ramadaanka.
7. Iska yaree telefishinka/internetka – Ramadaanka waxaa muhiimada iska leh cibaada alle, internetka inkastoo macluumaad badan laga heli karo waxaa dad badan u isticmaalaan in ay waqtiga ku dhameeyaan. Iska ilaali fidnada Facebook. Telefishinka laftiisu faa’iido badan ma leh. Hadaba waxaad qorshaha ku darsataa in xiliga ramadaanka aad iska yareyso labada aalood. Waxaad xoogaa saartaa barashada iyo akhrinta Quraanka.
8. Iska cafi cidii wax ku yeeshay – Waxkasta oo lagugu sameeyay Ramadaanku waa xiliga cafiska iyo nadiifinta qalbiga. Iska iloow waxyaabihii yaryaraa iyo kuwii waaweynaa ee lagugu sameeyay. U fidi cafis cidkasta oo aad wax ka tabaneyso.
50 arrimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybta 1-aad
ASC Walaal kheyr Allah ku siiyo Waan ka faa’i deystay Talooyinka Waxna waan ka qaatay
July 16, 2012 at 11:48
Asc/dhaman umada muslmka,ahow,waxan idinleyahay RAMADDAAN,KARIIM?hadan ugudbo fikirkeyga ma badna wa su,aal an weydinayo jimcale wahadi ey macqultahay wayo somali waxay kumah mahda,juq,ninkii,maraa,jabkeda,yaqaan, intas kadib walal cidi i,iga jawabikarta ama hore usomartay hadi famili,gaga iyo adigaba DNA AAD wada martan jawabta ila meqo ayey kuqadta sida cadada,ah wayo waxan rabay in an fasaxa mel ado hadi ey mudo dher hesanayan, cidi hore u,aragtay iyo cidi iga war,roon JW, waa,iimuhiim,mahadsanit?
asc walaal shukri aniga waxaan u maleynayaa in aay iyagaba semester ku jiraan waqtigaan marka adiga hadi aad dooneyso in aad meel u baxdo qof oon furaha u dhiibo kuu eego postada insha,alah waayo waxan is leeyahay ilaa bisha sideedaad fasax bey kumaqan yihin. waa aniga fikir keyga walaashey.
anoo dilqin maba ka istaagaayi cml
viiiva badar or cunto
July 16, 2012 at 12:30
Wax badan ayaan kafaa idaystay wakumahad santahay jimcale huuno
July 16, 2012 at 14:13
Asc, walaalkey Jimcaale waan kaaga mahadcelinayaa in badan talooyinka qiimaha badan eed noo soo gudbisay. Allena waxaan ka weydiisaneynaa inuu naga mid dhigo kuwa soonkooda iyo salaadoodaba la aqbalo. Walaalahayga soomaaliyeed ee bogaan ku xirana waxan leeyahay intii awooda oo wax ka go’aan aan kaalmeyno walaalaheena aan awoodin iney helaan afurka bishan ramadaan waan ognahay qofkii qof afuriyaa inuu helayo ajirka qofkii soomey oo kale asagoon laga dhimin kii soomanaa ee la afuriyeyna bal fiiriya raxmada Alle noogu deeqay aan is gargaaro mar kasta inshaa Allaah.
asc walalaha muslimkaa ee somaliyeedow ilaahay hana waafijiyo bisha qeyrka badan ee ramadaan walalayaal waxaad talada ku darsataan inaad dalkii iyo dadkenii u ducaysaan markasta qaasatan bishaan ramadaan oo ilahay raxmadiisu furan tahay asagaa dhibaatada aduunyada iyo mida aakhiraba oga bixi karnaa waxyaalaha xunxun ee qurbaha lagula kulamayna looga bixi karaa ama fasahaadka ka jira dhulka gaalada ama dhaqanada foosha xun
Sida badan ma aanan ka qeyb qaadan jirin isdhaafsiga fikradaha laakiin waxaan ahaa ruux aqriya dhamaan waxa la is dhahayo iyo waxa uu soo qoro jimcaale maanta mowduuca meesha saaran ma ahan mid sahlan oo laga aamusi karo waa mid uu jimcaale alaha xifdiyee malaayiin ruux hal mar wax fiican gaarsiiyay.
waxaan ka codsanayaa walaalaha maqaalkaan hooskiisa ku qoraya wax aan quseen mowduucaan meesha ka muuqda in aysan aheen wax haboon waxaayo waxaa uu ka hadlay waa bisha barakeesan ee Ramadaanka dadka DNA ayay ka hadlayaan fadlan iska daaya.
Talo walaalkeey jimcaale waxaan ka codsanayaa maadaama xiligaan ay tahay xili wabkaan indhaha lagu wada hayo in uu bisha ramadaan soo galiyo muxaadaraad afsoomaali loo soo rogay oo codna leh hadii uu awoodo insha allaah.
Wanaaga aad soo qortay adiga iyo waalikaa iyo xaaskaada iyo caruurtaa alaha idinka xoreeyo naarta janadiisana alaha idinkugu bishaareeyo bilashada bisha Ramadaan.
July 17, 2012 at 14:33
Maashaa’Allaah. Jazaakallaahu kheyr akhii Jimcaale, shukran.
xamdi omar says:
Maasha alaah ilahey ha Ka siyo ajar iyo xasanaad wan Ka faideystay mahadsanid
ramadan mubarak dhamantiinmashal walal jimcaale mahadsanid waa dadaalaynaa ilahay ha naga dhigo kuwii ka faidaysta fursada